Wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan sumowga amphibians | Kalluunka
Jarmal Portillo | | Amphibians
Dabeecadda waxaa jira farsamooyin kala duwan oo lagula qabsado deegaanka. Waxaa jira noocyo khubaro ku ah qarsoodiga, kuwo kale oo, si kastaba ha noqotee, yihiin ugaarsato wanaagsan, mid walbana wuxuu leeyahay dariiqa ay ku noolaadaan ka hor dhacdooyinka la soo bandhigayo.
Waxaa jira dad ambiibiyiin ah oo midabkoodu aad u soo jiidasho iyo muuqaal badan yahay. In kasta oo tani ay noqon karto khasaaro marka ay timaado daboolidda, ujeedkeedu waa ka soo horjeedka. Ambiyaani waa sun waana hadii laqabto sun ay ugaarsadaan.
1 Maxay qaar amphibians-ku sun ugu yihiin?
2 Sidee amphibians u helaan sun?
3 Sunta sidee ayey ugu jirtaa toads?
4 Sun ku jirta raha
5 Istaraatijiyadda Ambiyaanka Sunta leh
6 Astaamaha rahyada dendrobatid
7 La qabsashada ugaarsade
Maxay qaar amphibians-ku sun ugu yihiin?
Sunta ku jirta xayawaanka waa wax dabiici ah awood inaad iska difaacdo kuwa ugaarsadayaasha ah. Amphibians-ka waxay maqaarkooda ku leeyihiin laba nooc oo qanjirro ah oo u adeega saliidaynta iyo qanjidhada granular halkaasoo ay ku jiraan sunta.
Inta badan dadka Ambiya waa sun. Laakiin tan macnaheedu maaha inay khatar ku yihiin caafimaadka. Kaliya dhawr rah ayaa khatar ku ah aadanaha. Ambiibiyiinta dhexdeeda, sunta waxaa lagu keydiyaa qanjidhada sunta taasoo awood u leh inay ku qariso xaalad khatar ah. Caadi ahaan, amphibian-ku ma aha mid aad u sun ah, sidaa darteed markii la weeraro, waxay kaliya ku keentaa cuncunka afka. Tani waxay keentaa ugaadha inuu u daayo. Sidan oo kale, sunta ayaa saameyn ku leh difaaca amphibian-ka.
Sunta sunta ah ee loo yaqaan 'Amphibian venom' waxay kaloo leedahay astaamo antimicrobial ah si ay isaga difaacdo jeermiska cudurada keena. Dabeecadda, waan ognahay inay jirto habka xulashada dabiiciga ah, taas oo noocyadu u soo baxaan sida ugu fiican ee ay ula qabsadaan xaaladaha deegaanka. Hagaag, waxaa jira hanaan xulasho dabiici ah oo sababaya kuwa ambiibiyiinta ah inay sifiican uga noolaadaan marka loo eego sunta ay ka awood iyo waxyeello badan yihiin. Haddii aan la helin nidaamkan xulashada dabiiciga ah, sunta dhammaan rahyada sunta ahi ma noqon doonto mid wax u dhinta sida ay maanta tahay. Si fudud, waxay buuxin lahayd shaqada digniinta ugaadhsiga awooddeeda inay ka fogayso oo awood u yeelato inay uga digto gadaal midabyada noocan oo kale ah.
Sidee amphibians u helaan sun?
Raha qaar, sida madax-wareeryada, ayaa ugu horreyn quudiya qudhaanjada. Caadadan cunista qudhaanjada ayaa ah mid aad ugu badan dunida raha iyo toka iyo waa lagama maarmaan iyaga inay helaan sunta taas oo ka dhigaysa inay awoodaan inay iska difaacaan ugaarsiga.
Rahaani waxay fuliyaan istiraatiijiyado quudin ah oo ku saleysan helitaanka sunta iyada oo loo marayo cunitaanka qudhaanjada. Raha Arrowhead waa kuwa ugu sunta badan adduunka (sida aan gadaal ka arki doonno) waxayna ku helaan sunta adag iyaga oo quudinaya milix-macaan. Kuwa milixdan leh ayaa leh sunta alkaloid jirkooda iyo rahyada, ka dib markaad liqdid, waad afduubataa oo ku keydisaa suntaan si aad sun u noqotid.
Sunta sidee ayey ugu jirtaa toads?
Toads badankood waxay leeyihiin suno aan waxyeello u lahayn aadanaha maxaa yeelay ma haystaan ​​aalad u adeegta sidii sunta sunta lagu buufiyo. Haddii aad qabato mid ka mid ah suulashaas, waxa ugu badan ee kuu sababi kara waa xoogaa xanaaq indhaha ama afka ah markii sunta ay taabato meelahaas.
Si kastaba ha noqotee, eeyaha iyo bisadaha waxay sababi karaan dhibaato markii ay cunaan suufka. Mar alla markii ay liqaan tooga, waxay xitaa u keeni kartaa dhimasho wadno xanuun daran haddii aan isla markiiba la daaweyn.
Waxaa jira tootooyin, markii la liqo, sababa saameyn hallucinogenic ah. Tusaale ahaan, toon Sonoran toad (bufo alvarius) waa tooga oo leh Saamaynta hallucinogenic ee xoogan.
Sun ku jirta raha
Raha sidoo kale waxay umuuqdaan xayawaan badan oo aan "dhib lahayn", laakiin xitaa way daboolan yihiin oo sunta maqaarkooda ayaa ku ilaalinaysa. Raha kaliya ee aan laheyn sunta waa raha cagaaran. Waxay Ma hayso walax sun ah oo innaga ama xayawaan kasta saamayn kara. Taasi waa sababta aan u dhadhamin karno lugaha raha iyadoon wax cabsi ah laga qabin inay si xun u dhammaato.
Dhinaca kale, waxaan leenahay raha fallaadh (Dendrobates sp.) waa raha ugu sunta badan adduunka, oo awood u leh inuu dilo goriil kaliya markuu yimaado xiriir.
Istaraatijiyadda Ambiyaanka Sunta leh
Ambiibiyaanadan waxay u isticmaalaan sunta jawaabta fudud ee hanjabaadaha ugaarsadayaasha ugu xoogan. Waa istaraatiijiyad ay ku qasbanaan karaan inay la jaanqaadaan duruufaha ka dhasha kana badbaada.
Ka mid ah raha ugu halista badan meeraha aan ka helno the Dendrobatids. Kuwani waxay ka tirsan yihiin qoyska reer anuran. Kuwa ugu caansan, horeyna loo soo sheegay, waa rahyada fallaarta. Waxay caadi ahaan degan yihiin dhammaan Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Waa nooc ka mid ah meelaha ugu daran, sidaa darteed ma awoodi doonno inaan ka helno meelo kale oo adduunka ka mid ah.
Rahaasi waxay leeyihiin astaamo ka dhigaysa mid iyaga u gaar ah. Waxay leeyihiin maqaar codadkiisu ay dhalaalayaan oo leh midabbo dhererkoodu aad u sarreeyo Kaliya maahan midab keliya, sidaa darteed haddii aan dooneyno inaan aqoonsanno, midabku maahan furaha ugu habboon. Waxaan heli karnaa noocyo kala duwan oo midabyo ah oo ku kala duwan midabka liinta, illaa madow, jaalle iyo xitaa casaan.
Sidaan horay u sheegay, waxaa jira hanaan xul ah oo dabiici ah oo ka dhigaya noocyada inay la qabsadaan xaaladaha ay soo bandhigaan oo kaliya kuwa ugu xoog badan ay ku noolaadaan oo horumariyaan. Taariikhda oo dhan, ugaarsadayaasha rahyadaas ku dhinteen iyaga oo isku dayaya saameynteeda sumeysan awgeed. Taasi waa sababta, xaaladdan oo kale, rahyadu waxay caan ku yihiin inay "uga digaan" ugaarsadaha inuu sun yahay oo aanu xitaa ku mashquulin qabashadiisa.
Waxa caadiga ah ee dabeecadda waa in la qariyo si aan loogu ugaadhin xayawaan kale, laakiin dendrobatids waa ka soo horjeedka. Waxay awood u leeyihiin inay ku noolaadaan noocyo kala duwan oo nidaamka deegaanka ah. Waxaa laga heli karaa meelaha sida kaymaha daruuriga ah, sida hawdka kulaylaha, kaymaha Andean, iyo aagagga wax soosaarka. Xitaa xayawaankani waxay si fiican u noolaan karaan illaa 2000 mitir.
Astaamaha rahyada dendrobatid
Si loo arko mid ka mid ah rahyadaas waa inaan ku dhiiranaa duurka kuleylka ah maalintii. Thanks to midabkooda cajiibka ah waxaan ka heli karnaa iyaga si fudud. Waxay yihiin kuwa maalinle ah oo cuntadooduna ku saleysan tahay ugaarsashada cayayaanka yaryar iyo kuwa loo yaqaan 'arthropods' sida qudhaanjada, ayaxa, lamidka, caarada, iwm, inkasta oo ay xusid mudan tahay in caadooyinka cunidu ay aad ugu kala duwan yihiin noocyada kala duwan ee rahyada.
Sidii aan horayba u soo sheegay, heerarka sunta badan ee rahyadan ay leeyihiin waxaa u sabab ah alkaloids-ka sunta leh ee laga helo dusha sare ee maqaarka qaar badan oo rahaas ah. Inta badan, markay toos ula xiriiraan dusha sare ee noolaha kale, waxay awoodaan inay sababaan dhimasho.
La qabsashada ugaarsade
Marka la soo koobo istaraatiijiyaddan in raha sunta ahi ay awood u leeyihiin inay ka cararaan ugaarsigooda, waxaan sidoo kale ku darnaa in habka xulashada dabiiciga ah ee ay rahu ku helaan sunta sii kordheysa ee xoogga leh, sidoo kale u dhaqmaan si ay uga faa'iidaystaan ​​ugaarsato badan.
Waxaa jira ugaarsato cunnooyinkoodu dhowr leeyihiin noocyada ambiibiyiinta in ay u xuubsiibtay iyo Waxay awoodaan inay maqaarka ka saaraan raha kahor intaysan cunin iyagoon wax khatar ah ugu jirin inay sunta cunaan. Tusaale ahaan, otter, polecat ama mink, waa qaar mustelids oo bartay maqaarka raha kahor cunistiisa. Bini aadamku sidoo kale waan sameynaa.
Xamaasad ahaan, qabiilooyinka qaarkood, fallaaraha ayaa lagu dhajiyay sunta raha si ay u awood u yeeshaan inay ugaarsadaan xayawaano badan. Sidaa awgeed, waxay leeyihiin magaca rahyo fallaadh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » kuwa kale » Amphibians » Ambiyayaal sun ah